Filtrer les éléments par date : samedi, 30 mai 2020
dimanche, 31 mai 2020 00:15
Fandikan-dalàna: Nidoboka eny Antanimora ilay mpamily « ambulance » nitondra olona an-tsokosoko
Tazomina am-ponja vonjimaika ao Antanimora ny mpamilin’ilay « ambulance » tra-tehaky ny Zandary teo Ampihaviana Antsirabe nitondra olona an-tsokosoko hiakatra aty Antananarivo ny harivan’ny 26 may 2020.
Natolotra ny Pôle anti-Corruption Antananarivo ny raharaha taorian’ny famotorana nataon’ny Zandary. Fanararaotam-pahefana, kolikoly, ady tombontsoa ary fandikan-dalàna amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao no anisany vesatra iampangana ilay mpamily. Hotsaraina amin’ny 16 jona 2020 ny raharaha.
dimanche, 31 mai 2020 00:03
Vakoka: Mitaky ny handravana ny « Colisée » ao anaty Rovan’Analamanga ny Taranaky ny Andriamanjaka eto Imerina
Nanao fanambarana ny Taranaky ny Andriamanjaka eto Imerina mitaky ny handravana ny "Kianja Masoandro" (Colisée) ao anaty Rovan’Analamanga.
samedi, 30 mai 2020 23:43
Taorian'ny fakan-kevitra nataon'ny Filoham-pirenena tamin'ireo filohana Andrimpanjakana 3: ny Antenimieram-pirenena, ny Antenimierandoholona, ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, dia nandray didim-panjakana ny Filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina, teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra, fa tohizana ary mihatra avy hatrany, manomboka ny 30 mai 2020, eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana » (état d’urgence sanitaire) mandritra ny 15 andro noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana.
samedi, 30 mai 2020 23:40
Covid19: Andiana miaramila 250 lahy nalefa hanao tantsoroka any Toamasina
"Bataillon multimission" no iantsoana azy ity, ahitana miaramila 250 lahy ary tarihin'ny Lietna kolonely Berarazana Patricio. Matihanina amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny ambana Coronavirus izy ireto, misy dokotera sy mpitsabo miaramila ary miaramila avy amin'ny andian-tafika samihafa.
samedi, 30 mai 2020 12:59
Toamasina: Passation de Service na famindran-draharaha
Vita androany Asabotsy 30 mey 2020 antoandro ny lanonana tsotsotra famindran-draharaha teo amin’Andriamatoa PREFET n’i Toamasina vaovao RAZAFIARISON Jean Jugus, Administrateur Civil de Classe exceptionnelle, sy ny Préfet teo aloha BENANDRASANA Cyrille, Administrateur Civil de classe exceptionnelle.
Henin-kaja ny lanonana satria Minisitra 03 mianadahy mianaka no nanotrona izany nisolo tena ny Fitondram-panjakana.
Nanotrona izany koa ny Governora RAFIDISON Richard Théodore, ny Ben'ny Tanàna RAKOTONIRINA Nantenaina, ny ekipan'ny Prefecture ary ireo Talem-paritra sy Lehiben'ny Sampan-draharaha sy Lehiben'ny Boriborin-tany eto Toamasina.
Raha 6% amin'izao ny tahan'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, na batterie, dia hivoatra aingana be ho lasa 50% any Eoraopa afaka 5 taona.
Manararoatra mametraka ny drafitra fanovana avokoa ireo orinasa lehibe mpanamboatra fiarakodia amin'izao krizy maneran-tany ateraky ny Covid-19 izao.
Hiova arak'izany ny asa sy ny fomba fiasa, satria dia ny akora sy ny fanamboarana batterie izany no iainga, fa hihena avokoa ny resaka solika, na dia mbola tsy lefy aza izy.
Manoloana ny krizy maneran-tany ateraky Covid-19 sy fanohizana ny programa fanarenana ny orinasa mpanamboatra fiarakodia Renault, dia androaka mpiasa 15 000 maneran-tany izy, ka ny 4 600 amin'izany dia ao Frantsa.
Ny tanjona dia ny hitsitsiana hatrany amin'ny 2 miliara Euro any.
Tombanana hihena 3.3 tapitrisa ny isan'ny fiara vokarina ao anatin'ny taona raha 4 tapitrisa izy teo aloha.
samedi, 30 mai 2020 12:09
Kolikoly: Ady amin'ireo dahalo ambony latabatra
Ireo Minisitra misahana ny fandriam-pahalemana, ny Minisitry ny fitsarana, ny Fiarovam-pirenena, ny Polisy ary ny Zandarimaria dia nanambara tamin'ireo Solombavam-bahoaka, nandritra ny fihaonana tamin'izy ireo, fa hiady amin'ny heriny manontolo an'ireo dahalo ambony latabatra, toy ny mpiasam-panjakana na ny olom-boafidy manao ny tsy mety, mihoa-pefy ary manao kolikoly sy manao ramatahora na manararoa-pahefana.
Efa maro ireo sarona sy voasazy, raha tsy hilaza afatsy ny mpitsara nahantona amin'ny asany tany Toliara, ireo Zandary nahiditra amponja sy nesorina tamin'ny asany.
Ny Filoham-pirenena rahateo efa nilaza mazava fa tsy naman'izay mpitsikombakomba sy mpiaro jiolahy, na iza izy na iza.